ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကို မုန်တိုင်းဦးတည်တိုက်ခတ်၊ သုံးဦးပျောက်ဆုံး၊ ထောင်ပေါင်းများစွာတို - Yangon Media Group
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကို မုန်တိုင်းဦးတည်တိုက်ခတ်၊ သုံးဦးပျောက်ဆုံး၊ ထောင်ပေါင်းများစွာတို
မနီလာ၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း တွင် အပူပိုင်းမုန်တိုင်း”ကိုင်တက်” သည် ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်ကတိုက် ခတ်ခဲ့၍ တံငါသည်သုံးဦးပျောက် ဆုံးနေကာ လူထောင်ပေါင်းများ စွာတို့ နေအိမ်များမှထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေကြရသည်ဟု အာ ဏာပိုင်များက ထုတ်ဖော်ပြော ကြားလိုက်သည်။
လေတိုက်နှုန်းတစ်နာရီ ကီ လိုမီတာ ၁ဝဝ(၆၂ မိုင်)နှုန်းဖြင့် တိုက်ခတ်ခဲ့၍ နိုင်ငံ၏တတိယ အကြီးဆုံးကျွန်းဖြစ်သော ဆမား ကျွန်းတွင်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းဆီသို့ မုန်တိုင်းရွေ့ လျားသွားခဲ့သည်ဟု မိုးလေဝသ ဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ပြောဆို လိုက်သည်။ မုန်တိုင်းသင့်လူဦးရေ ၃၈ဝဝဝ ကျော်အား ဒေသန္တရအာ ဏာပိုင်များက ကူညီကယ်ဆယ် ပေးခဲ့ရသည်။ မုန်တိုင်းကြောင့် လူဦးရေ ၄ ဒသမ ၅ သန်းနေထိုင် ရာ ဆမားကျွန်းနှင့် လေတီကျွန်း များ၌ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်း ကာ ရေကြီးခြင်း၊ တောင်ပြိုခြင်း များခံစားကြရသည်။
လှိုင်းကြီးနေသောကြောင့် ကျွန်းပတ်သင်္ဘောများထွက်ခွာ ခြင်းကို ရပ်နားထားခဲ့သည်။ တံငါ သည်သုံးဦးပျောက်ဆုံးနေသည် ဟုလည်း အာဏာပိုင်များက ထုတ် ဖော်ပြောဆိုလိုက်သည်။ လေတီကျွန်းမြို့တော် တက်လိုဘန်းမြို့တွင် မြေပြိုမှုကြောင့် မိန်းကလေးတစ်ဦး နှင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးတို့ ထိခိုက် ဒဏ်ရာများ ရရှိသွားခဲ့သည်။
ထရန့်၏ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချမှု တားမြစ်ချက်ကို အမေရိကန်တရားသူကြီး ပယ်ချ
ဗင်နီဇွဲလားအစိုးရနှင့် အတိုက်အခံတို့ဆွေးနွေးပွဲအသစ် ပြုလုပ်
ကသာမြို့နယ်တွင် ဆရာတစ်ဦးက ငါးတန်းကျောင်းသားနှစ်ဦးကို သစ်သားချောင်းဖြင့် ရိုက်နှက်ဆုံး??
ကတ္တရာလမ်းများကို တစ်ကွက်ပေါက် တစ်ကွက်ပြင်စနစ်ဖြင့် အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ ပြုပြင်ရန် ညွှန်??
ဟာဝိုင်အီမီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်ကို သင်္ဘောဖြင့်လှည့်လည်ကြည့်ရှုစဉ် ရေအောက်မှမီးတောင်တစ?
တရားမဝင် လက်နက် ကိုင်ဆောင်မှုများနှင့် ပြည်သူ့ဘဝ လုံခြုံရေး
ကျိုက်ထို၌ အမျိုးသားနှစ်ဦးထံမှ စိတ်ကြွဆေးပြားများ ဖမ်းဆီးမိ